LCS Coffee အား ရန်ကုန် တွင်​ ipivi.com မှတဆင့်​ ဝယ်​ယူပါ။
*** LCS Coffee *** အဆီကျ caffee
Price-8500 ks (၁၀ ထုတ်​)
နေ့သစ်တိုင်းအတွက် မိမိကိုယ်မိမိ ယုံကြည်မူ့ရှိရှိ လျောက်လှမ်းနိုင်ဖို့**LCS Coffee **က ကူညီပေးနိူင်ပါတယ်ရှင် ,!
*LCS Caffee* လေးဟာဆိုရင် လင်ဇီးမှို၊ ဂျင်စင်း နှင့် သီးစုံတို့ ပေါင်းစပ်ပါဝင်တာကြောင့် ကျန်းမာရေးနှင့်လည်း ညီညွတ်စေပါတယ် ။
SideEffect ကင်းကင်းသောက်သုံးနိုင်သည့်အပြင် ...
* အဆီကျလှပ အသားရေ ဖြူဖွေးတင်းရင်းစေခြင်း
*ရင်တုန်ကင်းဝေးကာ အားအင်ပြည့်ဖြိုး ခေါင်းကြည်လင်
* မူးမော်ခြင်းမရှိစေဘဲ လှပတဲ့နေ့ရက်တွေကို LCS
Coffee လေးနဲ့ ဖြတ်သန်းလိုက်ကြရအောင်နော်..!
(1 ဘူးမှာ 10 ထုပ်ပါဝင်ပြီး )1 လအတွင်း 10 ပေါင်မှ ပေါင်
20 အတွင်းကျနိုင်ပါတယ်ရှင်.. Thailand FDA ရသားပြီးသားမို့ ဘေးဥပါဒ်ကင်းကင်းနဲ့ ယုံကြည်စိတ်ချ
**အရသာနဲ့ အနံ့လေးကလည်း ကော်ဖီနံ့လေးသင်းp အရသာလည်း အရမ်းသောက်လို့ကောင်းပါတယ်နော်**
X- နို့တိုက်မိခင်များအဖို့ နို့ချိုတိုက်ကျွေးနေချိန် သောက်သုံးရန်မသင့်ပါ ...!
X - ရောဂါရှိ၍ ဆေးဝါးမှီဝဲနေသူများ ဆရာဝန်နှင့်တိုင်ပင်
အမည်: LCS Coffee